I-samsung galaxy s21 yemicimbi ephambili yosuku
Eyona Iindaba Kunye Nokuphononongwa Iintengiso zeSamsung ye-Samsung Galaxy S21
Inkulumbuso 2021 silapha, ke sifuna ukuqiniseka ukuba uzuza kakhulu kwi-spree spree spree, kwaye ungaphoswa naziphi na izivumelwano esele zijikeleza indawo yewebhu njengoko sichwetheza.
Kwizinto ezinokuthi ziphantse zibe yiholide yesizwe, unyaka nonyaka, sibona izivumelwano kunye nezaphulelo kumlo oMnyama ngoLwesihlanu- kwaye ungagcina ngokulula amakhulu eedola kubuchwephesha nakwizincedisi okoko nje usenza ngokuchanekileyo. (Sicebisa ukuba ulandele ezi Iingcebiso ezi-5 eziphambili zokuthenga ngamava amahle!)
... Kodwa linda! Ngaphambi kokuba wenze enye into, yenza oku!
Phambi kokuba siqhubeke, sifunaQinisekisa ukuba ubhalisile Inkulumbuso yeAmazon .Abafundi bafumana iinyanga ezi-6 simahla, emva koko banokuqhubeka nokonwaba Inkulumbuso yeAmazon & apos; uninzi lwezibonelelo zobulungu e50% isaphulelo. Kuthi sonke abanye abantu, ityala lasimahla lihlala kwiintsuku ezingama-30, kwaye ubulungu obuqhelekileyo buxabisa i $ 12.99 ngenyanga okanye i-119 yeedola ngonyaka.
Ungakwenza oko yabelana ngeakhawunti yakho yeAmazon ngaphandle kokophula nayiphi na imithetho! Ewe, ukuba unomfundi ekhaya, ungasoloko ubenza ukuba bakuncede ... (Awuzange uyive kuthi le nto!)
Eyona nto ibalaseleyo kwi-Samsung Prime Day ye-Samsung Galaxy S21
Isamsung iqhuba inyuselo enkulu kwiifowuni zeGlass zoSuku lweNkulumbuso ngezaphulelo ukuya kuthi ga25%(nangaphezulu, ngokucacileyo) kwiifowuni ezingatshixwanga, ke olu lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukufumana ikhontrakthi yefowuni.
Ifektri evuliwe yeFowuni yeSelfowuni eyi-128GB
I-Samsung Galaxy S21 5G: Ifektri ivuliwe: 128GB: Inguqulelo yase-US
$ 200 icinyiwe (25%) Thenga kwiAmazon
I-Samsung Galaxy S21 +
Ifektri evuliwe yeFowuni yeSelfowuni eyi-256GB yaseMelika
$ 270 isaphulelo (26%) Thenga kwiAmazon
Ifektri ivuliwe i-128GB
$ 300 icinyiwe (25%) Thenga kwiAmazon
Ayisiyiyo & apos; amaxesha amaninzi sibona izaphulelo ezothusayo zengqondo kwiiflegi zeSamsung eIAmazon. Uninzi lwabantu baseMelika kwezi ntsuku bathenga iifowuni zabo ngokuthe ngqo kubaphathi, ngesicwangciso esiqhotyoshelweyo, ke abo bathambekele ekuboneni ezinye zezaphulelo ezikhulu. Nangona kunjalo,Inkulumbusongaphandle kwaye zininzi Imicimbi yeAmazon yeNkulumbuso yeAmazon .
Elona galelo liGalaxy S21 eVerizon
Ukuya kuthi ga kwi-800 yeedola ushiye urhwebo ngaphakathi, ukuya kuthi ga kwiidola ezingama-300 ngaphezulu ngokwenza umgca omtsha ngaphandle kwamacingo angenamda
$ 800 icinyiwe (100%) Thengisa phakathi$ 0 $ 79999 Thenga kwiVerizon
$ 800 icinyiwe (80%) Thengisa phakathi$ 19999$ 99999 Thenga kwiVerizon
$ 800 icinyiwe (67%) Thengisa phakathi$ 39999$ 119999 Thenga kwiVerizon
Thenga enye, fumana i-1000 yeedola- PHAWULA ukuya kuthi ga kwi-300 yeedola xa uvula umgca omtsha nge-Unlimited
$ 1200 isaphulelo (100%) BOGO$ 0 $ 119999 Thenga kwiVerizon
Ngeentengiselwano ezifanayo kuyo yonke indawo, besingazi nokuba siqale ngaphi. Ingqekembe yaphosa imali kuyoInguqulelo-Lapho ungafumana khona okwangoku I-Samsung Galaxy S21 ngokoqobosimahla(ewe, ulivile elo lungelo!) okoko unokufumana urhwebo olufanelekileyo kwaye ukhethe isicwangciso seVerizon esingasikelwanga mda. Oko kukuthi, unga saukuya kuthi ga kwi-800 yeedolaNgokurhweba ngoku.
Ungasebenzisa eli khonkco ukuya eVerizon kunyejonga ukuba ifowuni yakho ikuluhlu lwezorhweboNgokucofa 'Jonga Iinkcukacha' kwisicatshulwa esincinci phantsi kwesithembiso esibhaliweyo. Kwi-pop-up, uya kufumana uluhlu lweemenyu ezihlayo zonke iifowuni ezifanelekileyo. Bamkela uninzi lweempawu, hayi i-Samsung kuphela. (Nina & apos; yamkelekile!)
Ngaphandle kwalonto, ukuthengwa kwefowuni entsha kufanelekile$ 699.99okanye ngaphezuluumgca omtsha, kwaye kwiIsicwangciso esingenamkhawulo,ikunika kwakhona ukuya kwi$ 300 yasimahlai-Mastercard ehlawulwe kwangaphambili (kunye neVerizon Stream TV yasimahla). Kwaye ucinga ukuba yintoni-ezi zivumelwano zimbini zinokubambekaukuya kuthi ga kwi-1100 leedola! Oko akukabali nokubala i-TV yasimahla (Sukuzikhathaza, asikufundeli sonke isicatshulwa esincinci).
Ukuba & apos; ubeke izinto zakho kwimodeli ephezulu, i-Galaxy S21 + inokuba nayo ukuya kuthi ga$ 800 isaphulelongesibonelelo sokurhweba ngokufanayo esichazwe apha ngasentla. Kuyafana nakwindlela ye-Galaxy S21 Ultraindlu yamandla, enokutsalwa kancinci ngayo$ 399,99ukuba uhlangabezana neemfuno zorhwebo.(Usafuna ukufumana ifowuni entsha ngesicwangciso esingenamkhawulo ukuze ulungele.)
Inkqubo ye- Galaxy S21 Ultra kwaye S21 + ngenene unayoThenga enye, Fumana iY1000 yeedolajongana ngokunjalo. (Usuku lukaTata kunye neApos; luza kuJuni 20,Wink ngamehlo!)
Eyona Dili yeGalaxy S21 kwi-AT & T.
Fumana ukuya kuthi ga kwi-800 yeedola ngesorhwebo
$ 800 icinyiwe (67%) Thengisa phakathi$ 39999$ 119999 Thenga kwi-AT & T
$ 800 icinyiwe (80%) Thengisa phakathi$ 199 $ 999Thenga kwi-AT & T
Yifumane simahla ngokurhweba ngaphakathi
$ 800 icinyiwe (100%) Thengisa phakathi$ 0 $ 79999 Thenga kwi-AT & T
I-AT & T itshatisa ezona ntengiso zibalaseleyo phaya ukuya kuthi ga$ 800ngexabiso ngethengisa phakathi, oko kuthetha ukuba unokufumana ivanillaI-S21 5Gngokoqobosimahla. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuze uxhamle kwesi sivumelwano, kuya kufuneka ukhethe isicwangciso esingenamda kwaye isixhobo sakho sokurhweba kufuneka sisebenze kakuhle.
Eyona Ndlela yeGlasi ye-S21 kwi-Samsung
Gcina i-700 yeedola ngokurhweba ngaphakathi, gcina i- $ 50 ngaphezulu ngemali yeVerizon
$ 750 icinyiwe (94%) Thengisa phakathi$ 4999$ 79999 Thenga kwi-Samsung
Gcina i-700 yeedola ngokurhweba ngaphakathi, gcina i-100 yeedola ngaphezulu ngemali yeVerizon
$ 800 icinyiwe (80%) Thengisa phakathi$ 19999$ 99999 Thenga kwi-Samsung
$ 750 icinyiwe (63%) Thengisa phakathi$ 44999$ 119999 Thenga kwi-Samsung
Isamsung kunye neapos; sIzaphulelo zakho kwi-S21 nazo zonke izivumelwano zorhwebo, nangona zahlukile kancinane. Kwinqanaba ngalinye ukusuka kwi-Galaxy S21uthotho, unokunyuka ukuya$ 800 isaphuleloIxabiso lentengiso kunye-uqikelele-ifowuni efanelekileyo yokungena.
Kwinto 'esisiseko'Galaxy S21(nangona ingenanto kodwa), inkxaso-mali yesiqhelo iyi- $ 33.34 yeenyanga ezingama-24, kodwa ngesipho esikhulu esisetyenzisiweyo, esinokuthi sehle siye kwi$ 2.09 / mo. Nokuba isikrini sakho siqhekekile, i-Samsung ibonelela nge$ 450 kwixabiso lokurhweba.Ukuba awukhethi ukuvula ifowuni yakho, i-Samsung ithembisa ukuya kuthi gaIkhredithi yeevenkile ezingama-200malunga nezixhobo.
Kukho & apos; s nayo$ 50- $ 100 isaphulelo(Kuxhomekeke kwimodeli) kwixabiso lentengiso liphelaS21umgca ngalo mzuzu, ukuba ukhetha inkxaso mali yenkxaso mali- enokuxinana nge (ukuya kuthi ga)$ 700 ngetyala ngephanyazoumnikelo.
Eyona Dili yeGlass S21 ngeyona Ndlela yokuThenga
Gcina i-150 yeedola ukuba uyasebenza namhlanje-Akukho zintambo ziqhotyoshelweyo!
$ 100 ikhutshiwe (13%)$ 69999$ 79999 Thenga kwiBestBuy
Gcina i-250 yeedola ukuba uyasebenza namhlanje-Akukho zintambo ziqhotyoshelweyo!
$ 200 icinyiwe (20%)$ 79999$ 99999 Thenga kwiBestBuy
$ 200 icinyiwe (17%)$ 99999$ 119999 Thenga kwiBestBuy
Eyona nto ithengiweyo yokuthenga kunye neapos ziyacaca kwaye zilula, akukho imitya iqhotyoshelweyo. Kwaye lusuku lwethu lwethamsanqa, ngenxa yokuba basibetha nge$ 150- $ 250 izaphuleloisebenza kuzo ZONKE zivuliweS21iimodeli kunye nokugcinwa okwahlukileyo. Ngokungafaniyo nesivumelwano seSamsung, awudingi ukukhetha isicwangciso sezavenge ukuze uxhamle kuso; Kufuneka njeisebenze ngomhla wokuthenga.
Eyona midlalo mihle yeGlass S21 eWalmart
I-AT & T 5G 128GB
$ 400 icinyiwe (47%)$ 450 yeedolaThenga kwiWalmart
$ 600 icinyiwe (57%)$ 450 yeedola 1050Thenga kwiWalmartIsivumelwano seWalmart kunye neapos s Galaxy S21 + ibandakanya intlawulo yenyanga eyi- $ 12.50 kwiminyaka emi-3 yokwahluka kwe-AT & T, ethi izise amaxabiso ayo ehle ukuya kuma- $ 450 ukusuka kwi- $ 850 yesiqhelo. Ukuba unomdla kwimodeli yeVerizon & apos ehamba nge- $ 1,050, uya kugcina i- $ 600 ngexesha lokuhlawula (iinyanga ezingama-30).
Eli nqaku lihlaziywa rhoqo, ke wena & ampos; uya kuhlala unolwazi lokuba zeziphi & iiapos ezikhoyo kwaye awuzukuphoswa zizo naziphi na izivumelwano.
Unokufuna kwakhona ukufunda:
Eyona misebenzi mihle ye-iPhone ngoSuku lweNkulumbuso: ungalindela ntoni
Eyona nto ibalaseleyo kwithebhulethi yoSuku lweAmazon yeAmazon: ungalindela ntoni
Eyona ntengiso yeTV yeAmazon yeNkulumbuso ijongene: ungalindela ntoni
Eyona misebenzi mihle yeApple AirPods ngoSuku lweNkulumbuso yeAmazon: ungalindela ntoni
Elona Dili liBalaseleyo ngeApple ngoSuku lweNkulumbuso: ungalindela ntoni
Eyona ntengiso yeNtloko yeBluetooth yeAmazon
Java jonga ukuba isikhombisi sikhona
IPixel 3a vs Pixel 3: konke oku kungumahluko
Ixabiso le-LG V30 kunye nomhla wokukhutshwa: Nazi zonke izinto esizaziyo ukuza kuthi ga ngoku
I-AT & T & apos; s LG G3 ixhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-PMA, endaweni yeQi
I-Samsung Galaxy Watch 3 vs Galaxy Watch Active 2 vs Apple Watch Series 5: uyilo, ii-specs kunye neempawu zothelekiso
I-Apple ibhengeza ngokusesikweni ukulibaziseka ekumiselweni kochungechunge lwe-5G ye-iPhone 12
Ukufika kukaBash Ngemizekelo